The Ab Presents Nepal » अमला खानुहोस कोरोना देखि धेरै रोगको गर्छ निर्मुल,अमलामा के के पोषक तत्व पाइन्छ छ त ?
अमला खानुहोस कोरोना देखि धेरै रोगको गर्छ निर्मुल,अमलामा के के पोषक तत्व पाइन्छ छ त ?
अमला खाने मुख्य सिजन भनेको नै हिउँदको सिजन हो । चैत्र–वैशाखदेखि साउनसम्म फुलिरहन्छ । उक्त फूलमा भदौसम्म सकेपछि मंसिरसम्म फल लागिसक्छ । असोजदेखि माघसम्मको समय अमला खान लायक समय हो ।’अमलाको प्रयोग धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ । तर ग्रामीण भेगमा विशेषतः मुखमा अमला राखेर बिस्तारै बिस्तारै चपाउने शैली नै बढी प्रचलनमा रहेको देख्न सकिन्छ ।
जोखिमसँग लड्न अमला
पौष्टिकता र लाभहरू
अमलाको पोषक तत्वहरूमा निम्न मात्रामा विभिन्न गुण सम्मिलित हुन्छ । पानी – ८१.२ प्रतिशत प्रोटिन – ०.५ प्रतिशत फ्याट – ०.१ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट – १४.१ प्रतिशत फाइबर – ३.४ प्रतिशत
क्याल्सियम – ०.०५ प्रतिशत पाउन सकिन्छ । १०० ग्राम अमलामा ६०० मिलिग्राम भिटामिन सी प्राप्त हुन्छ । अमलाको बारेमा एउटा विशेष कुरा के हो भने यसमा पाइने भिटामिन सी अरू खानामा जस्तो छिटै नष्ट हुँदैन । जतिसुकै सुख्खा भए पनि यसमा पोषक तत्व पाउन सकिन्छ । विभिन्न अनुसन्धानले यो प्रमाणित भइसकेको छ कि १६ कोसा केरामा पाउने भिटामिन सी एक अमलामा पाउन सकिन्छ’ ।
अमलाको औषधीय गुण
अमलाबाट धेरै शारीरिक फाइदा लिनु छ भने यसलाई कुटेर यसमा रहेको रस मात्रै सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर अन्य तरिकाले खाँदा पनि यसको गुण धेरै नष्ट भने हुँदैन । यसलाई धेरै तरिकाले खान सकिन्छ । अमलाको जुस निकाल्नको लागि पहिले यसको सानो सानो टुक्रा बनाउनुहोस् र बीउहरू हटाउनुहोस् । यी टुक्राहरूलाई रसरमा राख्नुहोस् र जुस निकाल्नुहोस् । यसलाई काट्ने क्रममा होसियार हुनुपर्छ, यसलाई फलामको सट्टा स्टिलको चक्कुले काट्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आमलाको रस बिहान खाली पेटमा पिउनु उत्तम हुन्छ । अमलाको रस स्वादिलो हुँदैन र धेरैलाई यो मन पनि पर्दैन । तसर्थ, सबै औषधीय गुणहरूका बाबजुद पनि धेरैले यसलाई यो विधिबाट प्रयोग गर्ने गर्दैनन्’ । धेरैले अमलालाई मुखमा राखेर चपाउन नै सहज ठान्छन् ‘।
अमलाको रससँग मह वा सख्खर पनि मिसाएर खान सकिन्छ । यसलाई जसरी प्रयोग गर्दा पनि अन्य फलहरूमा जस्तो यसमा पौष्टिकता कम हुने सम्भावना कम हुन्छ । अमलाले हाम्रो मूत्र नलीलाई सफा बनाउन मद्धत गर्छ । यदि तपाईंलाई पिसाब सम्बन्धी समस्या छ भने यसले त्यसलाई दूर गराउन मद्धत गर्छ । अमला बाँझोपन र वीर्यसम्बन्धी कमजोरी भएकाहरूको लागि अत्यधिक उपयुक्त हुन्छ ।अमला रगतको विकार क मगर्न एवं कब्जियत कम गर्न पनि मद्धतदायक हुन्छ । यो एक उत्कृष्ट प्रतिरक्षायुक्त खानेकुरा हो’ ।